Watch Alcatel One Touch tsy misy Android Wear amin'ny vidiny 129 Euro | Androidsis
Francisco Ruiz | | MWC, hevitra, SmartWatch
Miditra ny Mijanona ao amin'ny MWC15 any Barcelona i Alcatel, ho an'ny tanana voalohany, fantaro ny iray amin'ireo filokana farany indrindra amin'ny famantaranandro marani-tsaina na Wareables. Amin'ity tranga ity dia manolotra ny Smartwatch i Alcatel Vetson Kira Miantso Watch, famantaranandro marani-tsaina miaraka amina rafitra fikirakirana tompony, izany hoe tsy misy Android Wear ary tsy misy ny fametrahana apetraky ny fampiharana fanampiny ho an'ireo izay efa napetraka mialoha amin'ny alàlan'ny fitaovana.
Ahoana no ahitanao ny horonantsary eo an-tampon'ity lahatsoratra ity, ny Vetson Kira Miantso Watch Atolotra antsika ho fitaovana tena kanto sy somary kely kokoa noho ny mahazatra antsika amin'ny terminal misy ny Android Wear. Vita amin'ny metaly ary miaraka amina endrika izay ilazana ny marina fa tiako be io, very ny antso rehetra rehefa miditra amin'ny rafitra fiasa tsotra izy ary hitantsika, ohatra, ireo maso telo fotsiny izay azontsika atao fisafidianana tsy misy hatak'andro. Ny sasany amin'ny tarehy fijerena hoditra na hoditra na inona na inona tadiavintsika dia ireo izay hiaraka amintsika foana amin'ity famantaranandro ity satria tsy azontsika atao ny misintona lohahevitra vaovao na zavatra toy izany.
Ny zavatra ratsy iray hafa misy azy ireo dia ny azy ireo batterie namboarina 210 mAh fotsinyNa dia nanome toky antsika fizakan-tena maharitra roa andro aza i Alcatel nefa tsy mandoa vola, matahotra aho fa famantaranandro marani-tsaina iray hafa ity izay tsy haharitra asa iray andro. Mifanohitra amin'izany no izy, mahita lafy tsara sy mahomby koa izahay, hoy aho. Mba ho voafaritra kokoa, ny rafitra fiampangana terminal, izay miorina eo am-pototry ny fanidiana ny tadiny, izay amin'ny alàlan'ny fisintomana kely dia hisy USB hiseho fa afaka mifandray amin'ny charger azy isika raha tsy mila esorina ny Wareable amin'ny hato-tanana.
Ny iray amin'ireo fiasa mahaliana ao amin'ny terminal, dia hitantsika ao aminy sensor an'ny gadona ao anaty Ao ambadiky ny vatan'ny famantaranandro, sensor iray izay mandeha tsara tokoa ary tsy maintsy tononina fa manana azy io noho ny vidin'ny terminal, tadidintsika fa hamidy any Espana ihany io 129 euros, mety ho io ihany no terminal eo amin'ny elanelam-bidiny mampiditra an'io fampiasa io.
Tsy misy isalasalana, filokana tena mampidi-doza nataon'i Alcatel amin'ity fampidirana vaovao ity amin'ny tontolon'ny Wareables tsy misy rafitra fiasa Android. Fantsona iray hanarahanay akaiky azy Androidsis mahita fa ny fanekena toy izany dia eo amin'ny tsena Espaniola, na dia efa azontsika atao aza ny maminavina izany Hanao tabataba kely izy noho ny fetrany satria tsy misy ny rafitra fiasa Android Wear.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » MWC » Alcatel One Touch Watch, Alcatel's Wareable tsy misy Android Wear amin'ny vidiny 129 euro
Vao nividy azy aho ary diso fanantenana, tsy afaka nanao azy io ara-dalàna tamin'ny iphone 6 plus, iOS 8.1. Rehefa manandrana miditra amin'ny rindranasa mihetsika dia mikatona eo noho eo ary tsy mamela ny fidirana amin'ny famantaranandro raha tsy ireo fanapahana Bluetooth mitohy.